Madaxa Golaha Ciidamada Suudaan oo la kulmay Safiirka Soomaaliya ee dalkaas – Banaadir weyne
Madaxa Golaha Ciidamada Suudaan oo la kulmay Safiirka Soomaaliya ee dalkaas
Khartoum (SONNA) – Madaxa Golaha Ciidamada ku meel-gaarka ah ee dalka Suudaan ayaa shalay oo Talaado ah xafiiskiisa kula kulmay safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo muddo xileedkiisa dhamaaday.
Warsaxaafadeed uu soo saaray Safiirka Soomaaliya ee Suudaan C/risaaq Axmed .Sh. Max’uud ayuu ku xusay qoto dheerida xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan, wuxuuna intaasiraaciyay inuu kaga mahadcelinayo Madaxa Golaha Ciidamada, xukuumadda iyo shacbiga Suudaan, garab istaaggii iyo taageeradii walaalahooda dhabta ah ee Soomaaliya, sidoo kalana ay Soomaaliya taageero hiil iyo hooba la garab taagan tahay walaalahooda Suudaan, wuxuuna Danjire C/risaaq Axmed .Sh. Max’uud xiriirka labada dal ku tilmaamay mid soo jireen ah.
Dhanka kale Safiirka Soomaaliya ayaa shacbiga Walaalaha ee Suudaan u rajeeyay midnimo, wadajir iyo Xasillooni, Wuxuuna yiri “qofka caaqilka ah waa kan ku tusaale qaata duruufaha dadka hareerihiisa la kulmaan” waxaana loo baahan yahay ayuu yiri in wax laga barto xaaladaha adag ee soo maray qaar ka mid ah dalalka deriska la ah Suudaan.
Danjire C/risaaq Axmed .Sh. Max’uud ayaa ugu danbayntii warsaxaafadeedkiisa ugu mahadceliyay xukuumadda iyo shacbiga Suudaan gacansiintii wanaagsanayd uu ka helay muddo xileedkiisii danjirannimo, Shacbiga Suudaanna wuxuu u rajeeyay degenaansho iyo barwaaqo.